INational AIDS Council Isidinga Imali Yokuqhuba Inhlelo Zayo
Inhlanganiso yeNational Aids Council ithi isidinga ezinye indlela zokukhuphula imali abayibuthanisayo yenhlelo zokulwisana lokumemetheka kwegciwane lengculaza – HIV/AIDS - kusiyafika umnyaka ka 2018.
Ukuhlawulisa abaphila ngokuthengisa, umthelo we AIDS Levy, uhulumende angenza basebenze ngokusemthethweni, kungenye yendlela abe NAC, abathi ingasetshenziswa, ukuthuthukisa isikhwama sabo esiqhubeka sisehla kusukela ngomnyaka ka 2014.
Lokhu kuvezwe ngesinye seziphathamandla senhlanganiso ye NAC, umnumzana Trust Govero, esemhlanganweni wemfundiso lentathelizindaba eziloba ngezempilakahle, wokuhlaziya isimo senhlelo zikahulumende kwezegciwane legculaza,i ZNASP III, ewoteleni ye Holiday Inn eHarare.
UGovero uthi kumqoka ukuba ilizwe lizilungiselele, ukwenqabela inkinga engaba khona lapho abakwamanye amazwe, abasiza ngemali okwamanje,bengamisa lolo sizo.
Eyinye yalezintathelizindaba, ebikulomhlangano, uNkosana Dlamini, uthi uvumelana lalombono.
Kodwa uDlamini uthi, kuzoba nzima,ukuhlawulisa abaphila ngokuthengisa, umthelo we Aids Levy.
Abe NAC bathi isilinganiso sokungamatshumi amabili lane ekhulwini (24%) semali abayibuthanisayo isetshenziswa ukuthenga amaphilisi ama ARV’s.
Bathi isifiso sabo kuyikuba sikhuphuke lesi silinganiso semali esetshenziswa ukuthenga amaphilisi anikezwa kulabo abaphila legciwane, kusilinganiso sokungamatshumi amathathu ( 30% ), kusiyafika umnyaka ka 2018.